नेतृत्व हस्तान्तरणको अवसर- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१७
भाद्र २९, २०७४ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — मधेसी राजनीति यतिखेर ढलानको छेउतिर देखिए पनि प्रदेश–२ को राजनीतिक महत्त्वमा प्रश्नचिन्ह लगाउने अवस्था पक्कै छैन । ७ प्रदेशमध्ये बाँकीको केवल एक प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव भइराख्दा यति सार्‍हो आन्तरिक र बाह्य रुचिले पुष्टि गर्छ कि प्रदेश–२ नेपाली राजनीतिको ‘कम्पास’ हो ।
तसर्थ प्रदेश–२ को स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय क्षितिजमा मधेसको असन्तुष्टिलाई प्रदेश–२ ले नै प्रज्वलित गरिरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा हुने तृण तहको राजनीतिक अभ्यास र ताजा मतादेशबाट राजनीतिक भाष्यकारहरूले आ–आफ्ना अनुकूलको खेतीपाती सुरु गर्छन् र मधेस आन्दोलनको जोखना गरिन्छ। सबैलाई सम्भाव्य नियतिको पूर्ण जानकारी भए तापनि अहिलेदेखि नै आ–आफ्नो अत्तो थाप्ने खेल सुरु भइसकेको छ।
निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई प्राणवायु दिन्छ तथा यो शासन व्यवस्थाको वैधता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि हो। आवधिक रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनद्वारा नै लोकतन्त्रले जनभरोसा प्राप्त गर्छ र लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। स्वच्छता, निष्पक्षता, सहभागिता, समावेशीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता निर्वाचनका आधारभूत गुण के कसरी पालना भइराखेका छन्, यसले पनि लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्छ। उत्तरदायी स्थानीय सरकार निर्माणको निम्ति गाउँसभा सबल, सक्रिय र सिर्जनशील हुनुपर्छ। यसका निम्ति योग्य व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यासीको ठूलो हिस्सा गैरराजनीतिक चरित्रका व्यक्तिहरू छन्। केही पुराना अनुहारलाई पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसरी बहुसंख्यक उम्मेदवार निराश गर्ने खालका छन्। यसो गर्नमा यो वा त्यो दलतर्फ मात्र औंला ठड्याउन सकिँदैन। ठूला–साना सबै दल यसमा चोपलिएका छन्। थोरै मात्र नयाँ, दूरदृष्टि र सामथ्र्य भएका उम्मेदवारहरूलाई अगाडि सारिएको छ, जसबाट स्थानीय संरचनालाई सजीव बनाउन आशा गर्न सकिन्छ।
निर्वाचनसँंगै लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यबारे विरोधाभाषपूर्ण तथ्य देखा पर्दैछ। निश्चित रूपमा निर्वाचनको माध्यमले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया एक खुड्किलो माथि उक्लिनेछ। चुनावी गणितको आधारमा कुनै दल विशेषले आफूलाई ‘नेपाल विजेता’का रूपमा हर्षबढाइँ गर्ने मौका पाउँछन्। मित्रराष्ट्र भारतले चुनावी प्रक्रियामा सहयोगी भइदिएको सन्देश बलियो हुनेछ। संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार एउटा तहको संरचनाले पूर्णता पाउनेछ। हो पनि निर्वाचनको क्रममा भुइँ सतहसम्म राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ। सदरमुकाम केन्द्रित राजनीति गाउँ–देहात झरेको छ। यस पटक महानगर, उपमहानगरपालिका, नगर/गाउँपालिका सबैको क्षेत्र पुनर्संरचित भएको छ, विस्तृत भएको छ। लामो समयदेखि एक खालको इकाइ तहको सीमामाझ राजनीति गर्दै आएकाहरूले यसपटक फराकिलो क्षेत्र पाएका छन् र तिनले नयाँ मतदाता र नयाँ व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट गुज्रिनुपरेको छ। प्रदेश–२ लाई अरू प्रदेशको बराबरीमा ल्याइदिएको छ, किनभने अन्यत्र स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ।
खर्चिलो हुँदै गएको चुनावलाई व्यवस्थित गर्न दलहरूले गैरराजनीतिक प्रत्यासीलाई अवसर दिएका छन्। जसले अरू पेसाबाट अनैतिक रूपमा छोटो समयमा अकुत आर्जन गरेका थिए, तिनीहरू छोटो बाटोबाट राजनीतिक कद बनाउन चुनावी समरमा ओर्लेका छन्। पार्टीहरूको चुनावी अव्यवस्थाले लोकतन्त्रको व्यथालाई प्रकट गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिने उत्तरदायी शासन तथा कानुनीराज जस्ता सैद्धान्तिक मान्यताको त कुरै छाडौं, सिङ्गो राज्य पद्धतिलाई नै असफल गर्ने कार्य भइरहेका छन्। आखिर कहाँ बिग्रिए हाम्रा दलहरू? सच्याउने कहाँ र कसरी? कहाँ–कहाँ चुक भए? सच्याउनुपर्ने कुरा के–के हुन्? यी प्रश्नको स्पष्ट एवं निर्भीक उत्तर खोज्न र इमानदारीपूर्वक सच्याउन अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपरेको छ। त्यस अर्थमा यो निर्वाचन आशा र निराशाको दोसाँध हो।
दुई दशकपश्चात निर्वाचन भइराखेको हुनाले स्वभावत: जनतामा उत्साह देखिनुपथ्र्यो। तर जेजसरी चुनावी प्रक्रियालाई दलहरूले अगाडि बढाएका छन्, त्यसले गर्दा दलसँंग आबद्ध भएका परजीवीहरूलाई मात्र चुनाव लागेको छ। आम नागरिक बडो विस्मयसाथ यो सम्पूर्ण चुनावी खेललाई हेर्दैछन्। प्रदेश–२ बाढीबाट बढी पीडित भएको छ। बाढीको लगत्तै चुनावी प्रक्रिया सुरु भयो। यसले गर्दा राहत व्यवस्थापन पक्ष ओझेलमा पर्दै गएका छन्। राहतको दलीयकरण र अविवेकी वितरण भइरहेको छ। खासगरी चुनावी अर्जुनदृष्टि लिएर बढी प्रभावित भएका दलित समुदायलाई आफूतिर तान्ने उपक्रम हँुदैछ। राहत वितरणप्रति जसरी स्वतन्त्र निगरानी हुनुपथ्र्याे, त्यो पक्ष गौण भएको छ। अहिले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहज आवागमन हुन सकिरहेको छ्रैन। यसले पनि चुनावको सहजतामा चुनौती थपेको छ।
चुनावबाट कुन दल ठूलो संख्यामा आउँछन्, त्यो पक्ष गौण हँुदै गयो। यो दिग्भ्रमका निम्ति बौद्धिक वर्ग र राजनीतिज्ञहरू बढी जिम्मेवार छन्। मूल पक्ष हो, यस निर्वाचनले प्रदेश–२ मा शान्ति र स्थिरता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यस निर्वाचनले केही नयाँ द्वन्द्वको बीउ छर्दै गएको छ, पुराना द्वन्द्व त छँदैछ, अर्थात निर्वाचनले समस्याको समाधान गर्न गइरहेको छैन। यो यसकारणले भन्नु परिरहेको छ कि जेजस्ता गैरराजनीतिक उम्मेदवारहरू छन्, तिनीहरूले चुनावमार्फत स्थानीय सत्ता वैध रूपमा कब्जा गर्नेछन्। जसको पहिलो उद्देश्य आफ्नो लगानी असुल्ने हुनेछ। दल भनेको आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्रमद्वारा जनतालाई संगठित गर्ने र त्यस संगठित जनभावनालाई अभिव्यक्त र कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो। चुनावमा स्थानीय समस्या, सामथ्र्य र सरोकारबारे त्यति धेरै बहस भएको छैन। जसरी पनि कब्जा गर्ने मनोविज्ञानले दलहरू ग्रस्त छन्। यस क्रममा प्रत्येक राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व भूमिका परिवर्तनको कठिन संक्रमणमा परेको स्पष्ट नै छ।
अहिले पनि युवाहरूको एउटा हिस्सा चुनावमा सहभागिता जनाउन चाहिरहेका छैनन्। उनीहरू मधेसी मुद्दाको सहज अवतरण भएको ठान्दैनन्। राष्ट्रिय र छिमेकी शक्ति मिलेर जबर्जस्ती घाँटीमा हात लगाएर चुनावमा घचेटेको उनीहरूको तर्क छ। कतिपयले त ‘कोठली बाहिर ठप्पा’ भन्ने प्रचार–प्रसार पनि गरिराखेका छन्, यो जनअसन्तुष्टि देखाउने कतिपयको आफ्नै तरिका छन्। भोलि बन्ने स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा र सुविधान दिन सकेन भने राज्य र मधेसको दूरी ज्युँकात्युँ रहन्छ। खासगरी डाडु–पन्यु बोकेका दलहरू यस मामिलामा गम्भीर देखिएका छैनन्। आजको मधेसले ‘झ्वाइँ गरिएको घ्यु’ खान खोजेको हो।
जुन तरिकाले निर्वाचन गरिँदैछ, आचारसंहिताको चरम उल्लंघन गरिएको छ, यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आचारसंहिताको कार्यान्वयनतिर लागियो भने चुनाव गराउन सम्भव हुँदैन भनी तर्क राख्छन्। यसले के मनोविज्ञान देखाउँछ भने जसरी भए पनि चुनाव भइहालोस् भन्ने राज्यको चाहना छ। अर्थात निर्वाचनलाई एउटा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा मात्र निर्वाह गर्न खोजिएको छ। हुन त निर्वाचन आयोगले केही नाम चलेका हस्तीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर सामान्यजनले जुन रूपमा निर्वाचन खर्चिलो हँुदै बुझिरहेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रबन्ध देखापरेको छैन। यसले गर्दा निर्वाचनको अर्थ खस्किँदै गएको छ। दलहरूप्रतिको जनविश्वास ओरालो लाग्दै गएको छ। कसैले तर्क दिन सक्लान्, आखिर निर्वाचनबाट जित्ने त दलहरू नै हुन्। निश्चित रूपमा दल र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। दलहरूप्रतिको विश्वास निर्वाचनमार्फत उक्लिनुपर्ने हो, दलहरूका लागि निर्वाचन जनपरीक्षामा उत्तीर्ण हुने अवसर पनि हो। यो बडो संवेदनशील पक्ष हो। चुनावमा कुनै दलविशेष जित्नु र दलतन्त्रप्रति आम नागरिकको भरोसा थपिनु दुई फरक कुरा हुन्।
यस निर्वाचनको क्रममा केही संरचनागत त्रुटि देखिएका छन्। त्यसलाई पनि सच्याउने बाटो अगामी दिनमा खोज्नुपर्छ। क्षेत्रहरूको जसरी निर्धारण गरिएको छ, त्यो हेर्दा वर्चस्वशाली पक्षले जहाँ जसरी चाहे त्यहाँ कैंची चलाइदिए। खास–खास शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ अनुसार स्थानीय तहको स्तर कायम गरियो। यी सवालबारे अहिले पनि तैं चुप मै चुपको अवस्था छ। प्रत्येक जिल्लामा कायम हुनगएको यस्ता अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक सीमांकनलाई सच्याउनुपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचन त सम्पन्न भइनै हाल्छ, तर बाँकीका दुई निर्वाचनमा यस्तै प्रवृत्ति नदोहोरियोस्। त्यस निम्ति अहिलेदेखि नै नागरिक खबरदारी चाहिएको छ।
मूलत: निर्वाचन राजनीतिक त्रुटिलाई सच्याउने जनहस्तक्षेपको अवसर हो। तर यसपटक जनताले त्यो अवसर पाइराखेका छैनन्। उनीहरूसँग विकल्प सीमित छ। प्रत्यासीहरू मध्येकै कोही गैरराजनीतिक उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता छ। यसरी गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको निर्वाचनमार्फत वैधानिक वर्चस्व थपियो भने कालान्तरमा तिनीहरू दलभन्दा पनि अन्य स्थायी शक्तिकेन्द्रप्रति आकृष्ट र प्रतिबद्ध रहन्छन्। अहिलेको चुनौती भनेको स्थानीय संरचनालाई ‘लिगल अर्डर’बाट ‘मोरल अर्डर’मा कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने हो। सामाजिक स्वार्थ र शक्तिहरूको विविधतालाई समेट्ने कुनै पनि उदार लोकतन्त्रभित्र ती शक्ति र स्वार्थहरूका द्वन्द्व र तिनका बीच विवाद कायम रहन्छ नै, तर उत्तरदायित्व बोकेका दलहरूले भुइँ सतहको चाहना र उचालिएको चाहना बीचको भिन्नता पहिचान गरी आफ्नो नेतृत्व र कार्यक्रमको विकास गर्छ। निर्वाचन तिनका नेतृत्व र कार्यक्रमलाई जनअनुमोदन गर्ने वैधानिक अवसर हो। मूल्य र मान्यता सहितको निर्वाचनले नै द्वन्द्वको न्युनीकरण र सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सघाउ पुर्‍याउन सक्छ। मूल पक्ष हो, जनताको राजनीतिलाई निर्वाचनले स्थापित गर्छ वा विस्थापित? आ–आफ्नो ठाउँमा सबै लगे रहो मुन्ना भाइ !